Fanavakavaham-Bolonkoditra No Saika Nandaozan’ilay Nahazo Ny Medaly Volamena Voalohan’i Brezila Tamin’ny Lalao Olaimpika 2016 Ny Taranja Judo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2016 7:28 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, Italiano, Ελληνικά, عربي, नेपाली, 繁體中文, 简体中文, English
Rafaela Silva, nahazo ny medaly volamena voalohany indrindra ho an'i Brezila tamin'ny lalao olaimpikan'i Rio. Saripika: David Ramos/Getty Images, nahazoana alalana avy amin'i Rio2016.
Mbola finaritra tamin'ny fandresena azon'i Rafaela Silva teo amin'ny taranja judo i Brezila, izay mitondra ny meday volamena voalohany ho an'ny mpampiatrano ny lalao olaimpika 2016. Saingy ho an'ireo ivelan'i Brezila dia maro ireo mety hanadino ny fanitsakitsahana ara-volonkoditra niaretany tamin'ny 2012 rehefa nahintsana tsy ho afaka milalao tamin'ny lalao olaimpika tany Londra izy.
Rafaela dia nihalehibe tao amin'ny fianakaviana iray mahantra tao amin'ny favela iray ao Rio de Janeiro antsoina hoe Cidade de Deus, izay nalaza tamin'ny filma malaza iray nivoaka tamin'ny 2002 mitondra ny lohateny hoe City of God. Niaraka tamin'ny zokiny vavy Raquel Silva izy no nanomboka nianatra judo teo amin'ny fahavalo taonany tao amin'ny Instituto Reação, tetikasam-piarahamonina iray natsangan'ilay judoka Breziliana taloha iray antsoina hoe Flávio Canto, izay nahazo meday alimo tany amin'ny lalao olaimpikan'i Athena 2004.
Tamin'ny faha-19 taonany i Rafaela no nifaninana voalohany tamin'ny lalao olaimpika tao Londra. Teo amin'ny dingana fifanitsanana izy no nahintsana nandritra ny ady nifanaovana tamin'ilay judoka Hondroà Hedvig noho ny nanaovany fihetsika iray efa nolazaina ho tsy ara-dalàna noho ny fanovana ny fitsipika. Nandao ny kianja tao anatin'ny ranomaso izy. “Nandeha tany an'efitranoko aho ary naka ny findaiko hitady fankaherezana, hitady hafatra”, hoy izy nandritra ny antsafa iray tao amin'ny Globo Espetacular, fantsona TV iray ao an-toerana, tamin'ny Janoary — vao nanokatra ny Twitter fotsiny dia efa nahita ny velively kanonta an-tsoratra sy fihoaran-teny manitsakitsa-bolonkoditra natao taminy.
Nangonin'ny tranonkala breziliana Sensacionalista ny roa tamin'ireo sioka (efa maro amin'izy ireny no nofafana ankehitriny).
“Mahamenatra amin'ny judo breziliana ity @rafaelasilvaa ity, tokony horarana amin'ny fanaovana spaoro izy”.
“Tandremo amin'ny fanaovana kitoatoa amin'ny 2016 eto Brezila, izay no izy, rehefa mahazo toerana mety ahitana anao ianao amin'ny Olaimpika hahaha”
“Zava-matotra ny lalao Olaimpika. Tsy ady ankitifitifitra ifanaovana amin'ny polisy io tsy akory”.
“Eh, matahotra aho! Tokony hampitony ny tenany izy, raha tsy izany izotherwise y hanao ippon hafa amin'ny karavasiko”
Nasehon'i Rafaela tamin'ny mpanangom-baovao ihany koa ny fahana Twitter tamin'izany fotoana izay ahitana iray mivaky toy izao “ao anaty karakara vy ny toeran'ny gidro, fa tsy any amin'ny lalao olaimpika”.
Taorian'ny fihoaran-teny tamin'ny 2012 dia nanapa-kevitra ny handao ny judo i Rafaela. Ny mpanazatra azy hatry ny fotoana ela, Geraldo Bernardes, no niteny fa nisy fotoana te-handao ny trano fotsiny izao izy, matahotra sao dia misy mahafantatra azy eny an-dalamben'i Rio de Janeiro ka hahazo teny maharary. Fikarakarana ara-toetsaina naharitra volana vitsy ihany no nahafahana namerina azy ho toy ny teo aloha tamin'ny 2013, rehefa nanapa-kevitra ny hifaninana tamin'ny fiadiana ny amboara erantany teo amin'ny judo izy — ka nandreseny teo amin'ny sokajy misy azy.
Taorian'ny fandresena vao azony, efa-taona taty aoriana, nanao antsafa mampihetsi-po i Rafaela hoe “Taorian'ny fahareseko, nitsikera ahy ny rehetra. Nolazain-dry zareo fa tsy natao ho ahy ny judo, fotoana nahamenatra ny fianakaviako izany. Ankehitriny aho tompondaka amin'ny lalao olaimpika eto amin'ny tanindrazako”.